Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay duqeyn dhanka cirka ah ku dishay Jeneraal Qasem Soleimani oo ahaa madaxa cutub kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Quds.
Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dilka Qasem Soleiman uu amray Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump. Soleimani ayaa lagu dilay meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee Baqdad ee dalka Ciraaq.
Haddaba waa kuma Jeneraal Qasem Soleiman?
Ciidamada Quds waxay hawgalo ka sameyaan meelo ka baxsan xuduuda dalka Iran, waxay taageero buuxda u muujiyeen Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, xilligii ay xoogaga mucaaradka Suuriya qabsadeen qeybo badan oo kamid ah dalkaas.
Goormuu awood yeeshay Qasem Suleimani?
Sanadihii dambe, Qasem Suleimani wuxuu aad ugu dhawaa hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ayatollah Ali Khamenei.
Intii uu madaxda ka ahaa ciidamada Quds, waxay awood u yeesheen in ay ballaariyaan awoodooda dhanka milateriga, sirdoonka, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Soleimani waxaa uu ka dhashay qoys sabool ah oo ka soo jeeda bariga dalka Iran, waxaana uu shaqo bilaabay isagoo 13 sano jir ah, si uu u caawiyo qoyskooda.
Wargeyska the Foreign Policy ayaa kusoo warramay in isagoo dhalinyaro ah uu ku biiray milateriga dalka Iran sanadkii 1979, waxaana la sheegay in uu kasoo qeyb qaatay dagaalkii dhexmaray dalalka Iran iyo Ciraaq, xilligaas oo dalka Iran looga aqoonsaday “nin geesi ah”.
Sanadkii 2005, markii dib loo soo dhisay Dowladdii Ciraaq, Qasem Suleimani wuxuu saameyn siyaasadeed ku yeeshay dowladii uu hogaaminayay ra’iisul wasaarihii hore ee Ciraaq, Nouri al-Maliki.
Qasem Suleimani wuxuu dhowr jeer ka badbaaday isku day di oo ay soo maleegeen Israel iyo qaar kamid ah dalalka Carabta. Dhowr jeer waxaa la sheegay in uu dhintay, inkastoo markii dambe la xaqiijiyay in uu nool yahay.
Sanadkii 2006, waxaa la sheegay in Soleimani uu ku dhintay diyaarad ku burburtay waqooyiga galbeed ee dalka Iran. Sidoo kale sanadkii 2012 waxaa lasoo wariyay in uu ku dhintay qarax ka dhacay caasimadda Suuriya ee Dimishiq, halkaas oo ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo aad ugu dhawaa madaxweyne Bashar Al Asad.
Dowladda Iran ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore sheegtay in ay fashilisay qorshe la doonayay in lagu khaarajiyo Qasem Soleimani, waxaana warbaahinta dalka Israel ay dhowr sano kahor kusoo warrantay in Israel ay dhowr jeer isku dayday in ay khaarajiso Qasem Soleimani.
said shuriye says:
waa warbixin xasaasi ah keeni karta isku dhac dalka iran iyo xulafada marayka
lkn sxpayaal xuquuqda saxaafda ilaaliya hadaan warka soo qadataan xigasho u sameeya waa iga talo hadii kale sumcadiina ayaa hoos u dhacaysa …..